မေလ 2022 တွင် Crypto အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နည်း | ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန် ၂ ခုကို လေ့လာပါ။ | ကုန်သွယ်မှုလေ့လာပါ။
Crypto ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်ရမလဲဆိုတာလေ့လာပါ - ကုန်သွယ်ရေး Crypto အတွက်ကုန်သွယ်ရေးနောက်ဆုံးလမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
ဤသည်၌ Crypto လမ်းညွှန်ကိုမည်သို့ကူးယူနိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ, wဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်း၏အခြေခံအားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းလျှောက်ပါ၊ မတူညီသောနည်းဗျူဟာများစွာကိုဆွေးနွေးပါ။ စနစ်ကျသောကုန်သွယ်ရေးချဉ်းကပ်နည်းကိုမည်သို့ဖော်ထုတ်ရမည်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပေးပါမည်။
2022 သည် crypto စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သိသိသာသာကောင်းစွာထွက်စတင်ခဲ့သည်။ အသစ်တဖန်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူထင်ရှားသောကိန်းဂဏန်းများ၏တန်ဖိုး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ ဒီထက်ပိုပြီး မြင့်တက်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ crypto သည် မတည်ငြိမ်သော ကုန်သွယ်မှုဈေးကွက်များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ရန် ကြိုးပမ်းနေပါက - သင်လိုအပ်သော အသိပညာကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ရန် အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ crypto ကုန်သွယ်မှုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ပြုတ်ကျမသွားမီ။
သင့်အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှတစ်ဆင့် cryptocurrencies အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်မှန်ကန်သောပွဲစားကိုသင်မည်သို့ရှာတွေ့နိုင်သည်ဟူသောအချက်အချို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အပိုင်း ၁။ Crypto ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ခြင်း
သင် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကဒီပိုင်ဆိုင်မှုအလုပ်လုပ်ပုံ၏အခြေခံကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းလင်းသောအရိုးအခြေခံများနှင့်စတင်ကြပါစို့။
သငျသညျပြီးသားအချို့သောအတိုင်းအတာအထိ cryptocurrencies ၏အယူအဆနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် cryptocurrencies သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဗဟိုဘဏ်သို့မဟုတ်အစိုးရမှထုတ်ပေးထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သူတို့၏တန်ဖိုးကိုငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးဖြင့်လည်းထောက်မထားခြင်းမရှိပါ။
cryptocurrency တိုင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် တိုကင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် Bitcoinဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် အကြွေစေ့များကို ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများစွာအတွက် လဲလှယ်ပေးသည့် ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤငွေပေးငွေယူတစ်ခုအား blockchain ဟုလူသိများသောအများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်သောမှတ်တမ်းတစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ cryptocurrencies ကိုအမှန်တကယ်ထူးခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားဖြစ်အောင် - ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုနိုင်သောအမြဲတမ်းမှတ်တမ်းကိုဖန်တီးသည်။
Bitcoin ကိုစတင်မိတ်ဆက်သောအခါ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Cryptocurrencies သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ Bitcoin ၏အောင်မြင်မှုကြောင့်မွေးထုတ်ထားသော cryptocurrencies ၈၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ အများစုမှာသင်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်နိုင်သည်။
အခုအခြေခံတွေကျသွားပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တတ်နိုင်သလောက်ပြောကြရအောင် ကုန်သွယ် အိမ်။
Crypto Trading ၏အခြေခံများမှာအဘယ်နည်း။
Cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်သည် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြွေစေ့၏ အနာဂတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကို မှန်းဆခြင်းတွင် လည်ပတ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သောအခါတွင် အကြွေစေ့၏စျေးနှုန်းသည် အဖွင့်ဈေးကွက်တွင် အကြွေစေ့စျေးတက်မည်၊ ကျဆင်းမည်ကို ခန့်မှန်းရန်ကြိုးစားနေပါသည်။ အရ Bitcoin အများအပြားခန့်မှန်းချက် Bitcoin သည် တက်ကြွနေပြီး ၎င်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
သင်ထင်မြင်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ကိုသင်လုပ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အမြတ်အစွန်းရရန်မျှော်လင့်သည်။
ဒီမှာ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှု၏လက်တွေ့ကျတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါသည်:
အရောင်းအဝယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ Litecoin USD နှင့် ဆန့်ကျင်သည်။
၎င်းကိုသင်၏ရွေးချယ်ထားသော cryptocurrency trading platform တွင် LTC / USD အဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
လက်ရှိ LTC / USD ၏စျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၁၇၇ ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။
သင်ဖန်တီးသည် ဝယ်ခြင်း pair တစုံအပေါ် $ 500 တန်ဖိုးရှိအမိန့်။
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် LTC / USD ၏ငွေလဲနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၉၀ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်
ဤသည် 7.3% ၏စျေးနှုန်းတိုးမှဘာသာပြန်ပေးသည်။
သင်၏အစုရှယ်ယာ ၅၀၀ တွင်အမြတ်အစွန်းကိုဒေါ်လာ ၃၆.၅၀ ရရှိခဲ့သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းသည် ကာလတိုအတွင်း မြင့်တက်လာမည်ဟု သင်ယူဆသောအခါတွင် ဤသည်မှာ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုတစ်ခု၏ ပုံမှန်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းကျဖို့မျှော်လင့်ထားရင် 'အတို' ခေါက်နိုင်ပါတယ်။ crypto အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ CFDs. ဤ Crypto အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နည်းကို လေ့လာပါ လမ်းညွှန်တွင် နောက်ပိုင်းတွင် တိုတောင်းသော အရောင်းအ၀ယ်၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပါမည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် crypto trading သည်အထက်သို့နှစ်မျိုးစလုံးကိုအသုံးချနိုင်သည် နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၏အောက်ဖက်စျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်း - သင်စျေးကွက်မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းကြောင်းပေးထားသည်။
နည်းလမ်းများစွာဖြင့်၊ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုသည် forex trading နှင့် ဆင်တူယိုးမှားများစွာကို ဆွဲဆောင်သည်။ စျေးကွက်နှစ်ခုလုံးတွင်၊ သင်သည် ငွေကြေးအတွဲများ၏ ငွေလဲနှုန်းကို မှန်းဆရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ညီတူညီမျှ ကျော်ကြားသည် - အနည်းဆုံး ပြင်ပအရာများဖြစ်သည်။
တကယ်တော့၊ forex ကဲ့သို့ပင်၊ cryptocurrencies ၏စျေးနှုန်းသည်လည်း စက္ကန့်တိုင်း သို့မဟုတ် ထို့ထက် အပြောင်းအလဲရှိသည်။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ကုန်သွယ်မှု cryptocurrency ကိုစဉ်းစားပါ။ဤစျေးနှုန်းရွေ့လျားမှုကိုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းနှင့် မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင် ၎င်းကိုဦးတည်မည့်နေရာကို သင်နားလည်ရန်လိုပါမည်။
cryptocurrency ၏ကမ္ဘာကြီး၌, ကုန်သွယ်အားလုံးအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအဘို့လဲလှယ်နိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် - crypto-cross dagang နှင့် crypto-fiat trading အတွဲများ။
Cryptocurrency Cross- Pairs
Crypto-cross အတွဲများတွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီသောအရောင်းအ ၀ ယ်နှစ်ခုကွဲပြားသည်။
ဥပမာ BTC / XLM အရောင်းအဝယ်ကိုမြင်လျှင် - BTC (Bitcoin) သည်အခြေခံငွေကြေးဖြစ်ပြီး XLM (Stellar) သည်ကိုးကားငွေကြေးဖြစ်သည်။
သင် BTC / XLM ကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလျှင်ကုန်သွယ်မှုသည်ဤနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။
crypto-cross pair တစုံ BTC / XLM ကို ၁၁၀,၀၂၃ ဖြင့်ရောင်းချသည်ဆိုပါစို့။
ဆိုလိုသည်မှာသင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သော Bitcoin တိုင်းအတွက်သင့်အနေဖြင့်တန်ဘိုး ၁၁၀,၀၂၃ တန်ဖိုးရှိကြယ်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏အလုပ်သည် crypto-cross pair တစုံ၏ဤငွေလဲလှယ်နှုန်းသည်မြင့်တက်မည်၊ ကျဆင်းမည်ကိုခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကုန်သည်များအထူးသဖြင့်အစပြုသူများအတွက်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးလာနိုင်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်၎င်းတို့စျေးကွက်များတွင် cryptocurrencies နှစ်ခုစလုံးကိုအခိုင်အမာအသိပညာရှိရန်လိုအပ်သည်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များစွာသည်ယူအက်စ်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ယူရိုကဲ့သို့သောအစိုးရမှထုတ်ဝြေဖန့်ချိသောငွေကြေးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုရှိသော cryptocurrency ကိုကုန်သွယ်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
ဤသည်ကျွန်တော်တို့ကို cryptocurrency ကုန်သွယ်စုံတွဲ၏ဒုတိယအမျိုးအစားမှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Fiat-to-crypto ငွေကြေးသည်ငွေကြေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ကုန်သွယ်မှုအတွဲ BTC/USD သို့မဟုတ် BTC/EUR ကိုသင်တွေ့သောအခါ၊ ၎င်းသည် သက်ဆိုင်ရာ fiat ငွေကြေးတွင် cryptocurrency ၏စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ BTC/USD သည် $40,000 တွင်စျေးနှုန်းရှိပါက - Bitcoin တစ်ခုသည် US ဒေါ်လာတွင် $40,000 တန်ဖိုးရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
များသောအားဖြင့် cryptocurrencies သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းပေါ် မူတည်၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကိုဗြိတိသျှပေါင်၊ ယူရို၊ ဂျပန်ယန်း၊ သြစတြေးလျဒေါ်လာနှင့်အခြားငွေကြေးများနှင့်လဲလှယ်နိုင်သည်။
ဒီနေရာတွင်တစ် ဦး Fiat-to-cryptocurrency ကုန်သွယ်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင် Litecoin ကို USD နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ရောင်းလိုသည်ဆိုပါစို့။
သင်၏ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် LTC / USD ဟုခေါ်သည့်အတွဲကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
LTC / USD ၏စျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၁၈၀ ဖြင့်ဖော်ပြသည်။
ဒီစုံတွဲဟာတန်ဖိုးမထားဘူးလို့ယုံတယ် - သင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တန်တဲ့ ၀ ယ်ယူမှုကိုကြိုတင်မှာထားတယ်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် LTC / USD ကိုဒေါ်လာ ၂၁၀ တန်ဖိုးရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာအတွဲ၏စျေးနှုန်းသည် ၁၆.၆၆% အထိတက်သွားသည်။
ဒီကုန်သွယ်မှုမှာခင်ဗျား $ 2,332 ကိုအမြတ်အစွန်းအဖြစ်ဒေါ်လာ ၃၃၂ ဖြင့်ပြန်လည်ပေးခဲ့သည်။
ယနေ့စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့် cryptocurrencies အားလုံးနီးပါးသည်အခြားငွေကြေးများနှင့်လဲလှယ်နိုင်သည်။
မှတ်သားရန်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ Fiat-to-cryptocurrency အတွဲများကို CFDs (Differences for Contract) မှတဆင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် CFDs ကိုသုံးတဲ့အခါသင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတိုက်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစား, သင်ကဘဏ္aာရေးတူရိယာကုန်သွယ်လိမ့်မည် အပုဒ် crypto-asset ၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစျေးနှုန်း။
ကုန်သွယ်မှု CFDs ၏အဓိကအားသာချက်မှာ သုညကော်မရှင်များနှင့် တင်းကျပ်စွာဝင်ရောက်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်။ န့်. ထို့အပြင်၊ သင့်ကုန်သွယ်မှုတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးချနိုင်သည့်အပြင် လွယ်ကူစွာ အတိုချုံးရောင်းချရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသည်။
Crypto ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်ရမလဲ - ကာလတိုသို့မဟုတ်ကာလရှည်?
ပထမဆုံးအကြိမ် crypto ကိုမည်သို့ကုန်သွယ်ရမည်ကိုလေ့လာသောအခါသင်၏ဘဏ္goalsာရေးရည်မှန်းချက်မှာမည်သည်ဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ crypto ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါသလား။ သို့မဟုတ်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ခြင်း / လွှဲခြင်းကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လိုပါသလား။
ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီတွင် မည်သည့်အရာပါဝင်သည်နှင့် ယင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးကိရိယာများရရှိနိုင်သည်ကို သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။
ရေတို cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်း CFDs မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း CFD များသည်သင့်အားပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ cryptocurrencies ကိုသင်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုသည်။
တစ်နည်းပြောရရင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ၌သင်၏ cryptocurrency သိုမဟုတ်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရန်ပုံငွေများ၏လုံခြုံမှုကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကိုယ်တိုင်မပူပန်သင့်ပါ။ CFD သည် cryptocurrency ၏စျေးနှုန်းကိုထင်ဟပ်စေရုံမျှမကသင့်အားကျဆင်းခြင်းနှင့်မြင့်တက်လာသောစျေးကွက်များမှအမြတ်အစွန်းရရှိရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် cryptocurrency ၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာတော့မည်ဟုသင်ယုံကြည်သောအခါ, သင်သည်ရှည်လျားသောအနေအထားကိုယူ။ ဝယ်အမိန့်ထားနိုင်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းတက်သွားပါကသင်ငွေထုတ်ချေးရန်အမိန့်ကိုဖန်တီးပြီးအမြတ်အစွန်းရရှိလိမ့်မည်။
ဆန့်ကျင်တွင်, သင် cryptocurrency ၏တန်ဖိုးကျလိမ့်မည်ဟုထင်လျှင် - သင်ကန ဦး ရောင်းအမိန့်အားဖြင့်အတိုသွားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်မှန်ကန်ပါကသင်ဝယ်ယူရန်အမှာစာကိုထုတ်ယူပြီးအမြတ်အစွန်းရရှိလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့် crypto CFD သည်လက်တွေ့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြသကြပါစို့။
DASH / USD ၏စျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၁၂၀ ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ DASH CFD ကိုဒေါ်လာ ၁၂၀ ဖြင့်လည်းဆိုလိုသည်။
အကယ်၍ သင်သည် DASH ၏စျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်ဟုထင်လျှင်သင်ရောင်းရန်အမိန့်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် DASH ၏စျေးနှုန်းသည်မြင့်တက်တော့မည်ဟုထင်လျှင်သင်ဝယ်ရန်အမှာစာကိုသင်ဖန်တီးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ DASH ၏စျေးနှုန်းသည်သင်ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်းရွေ့သွားလျှင်အမြတ်ရလိမ့်မည်။
ကာလတို CFD ကုန်သည်များသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှအကြာတွင်သူတို့၏ရာထူးများကိုဆက်လက်ထားရှိလေ့မရှိပါ။ အကြောင်းမှာငှားရမ်းထားသော CFD ထုတ်ကုန်များသည်ညတွင်းချင်းငွေပေးချေခြင်းနှင့်တွဲဖက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ - သင်၏ crypto CFD ရာထူးကို ညတိုင်းဖွင့်ထားရန်၊ သင်၏ပွဲစားအား အခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်မည်မျှပေးချေရမည့်တာဝန်သည် သင်ရွေးချယ်ထားသောပလပ်ဖောင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုတွင် သင်ရှယ်ယာမည်မျှပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Crypto ကို ဝယ်ပြီး ကိုင်ထားပါ။
ရေရှည်မဟာဗျူဟာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကသူတို့ကိုရောင်းဝယ်မည့်အစား cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည်။ ၎င်းကို crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြားတွင် HODLing ဟု လူသိများသော 'ဝယ်-ကိုင်-ကိုင်' ဗျူဟာဟု မကြာခဏခေါ်သည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် cryptocurrencies ကိုအမြတ်အစွန်းအတွက်ရောင်းရန်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်၊ cryptocurrencies ကိုလနှင့်နှစ်များကြာအောင်ကိုင်ထားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ရေရှည်မဟာဗျူဟာကိုသင်လိုချင်သည်ဆိုလျှင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဝယ်ခြင်း ယုံကြည်ရသောအွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး ထံမှသင်၏ cryptocurrency ။ သင့်အား အချိန်အနည်းငယ် သက်သာစေရန်၊ eToro မှ ထိန်းချုပ်ထားသော လူမှုကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ FCA, CySECနှင့် ASIC.
ဖောက်သည် ၁၇ သန်းကျော်နှင့်အတူ eToro သည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုမြင်ကွင်းတွင်နှစ်ရှည်လများနာမည်ကြီးခဲ့သည်။ အကျိုးတူအကျိုးဆောင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းနှင့် crypto ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်လည်းပေါင်းစပ်။ သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးကို online dashboard မှနေ၍ စီမံနိုင်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ eToro သည်သင့်အား cryptocurrencies ၁၀၀% ကော်မရှင်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကုန်သည်များသည်ရေရှည်နည်းဗျူဟာကို အသုံးပြု၍ cryptocurrency ကိုကုန်သွယ်ရန်ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ဤလမ်းကြောင်းကိုသင်သွားလိုပါက eToro သည်မတူကွဲပြားသောအစုစုကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် cryptocurrencies ၁၆ ခုနှင့်ကုန်သွယ်မှု ၉၀ ကျော်ကျော်ကိုခွင့်ပြုသည်။
အပိုင်း ၂: Crypto အမိန့်များကိုလေ့လာပါ
Cryptocurrency ကုန်သည်များသည်အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်မှုနှင့်သြဇာသက်ရောက်မှုများနှင့်မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းမှာမှန်ကန်သောကုန်သွယ်မှုအမှာစာများထားခြင်းဖြင့်သာဖြစ်နိုင်သည်။
သတိမထားမိသောသူများအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏ပွဲစားနှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအမိန့်သည်သင်၏ပွဲစားကိုသင်စျေးကွက်ထဲ ၀ င်လိုကြောင်း၊ မည်မျှရှယ်ယာမည်မျှနှင့်ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ခွာရန်မည်သို့မည်ပုံကိုသင့်ပွဲစားအားပြသသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Crypto လမ်းညွှန်၏လေ့လာနည်းဤအခန်းတွင်၊ သင်တို့ကိုအခိုင်အမာဆုပ်ကိုင်ထားရန်သင်လိုအပ်မည့်အသုံးဝင်ဆုံးသောအမိန့်များအားကျွန်ုပ်တို့အားလျှောက်လှမ်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှာစာများ၏အခြေခံအကျဆုံး - အမိန့်များကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းမှစတင်ပါလိမ့်မည်။ ဤအမှာစာများသည်ကုန်သွယ်မှုပုံစံအားလုံးအတွက်လိုအပ်သည်။
အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေဖြင့်၊ အကယ်၍ သင် cryptocrency ၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါကသင်နှင့်အတူဈေးကွက်သို့ ၀ င်လာလိမ့်မည်။ ဝယ်ခြင်း အမိန့်များနှင့်အတူကထွက်ရန် ရောင်းချ အမိန့်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းသည်အောက်သို့ကျရောက်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့ ဦး တည်နေသည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကသင်နှင့်အတူ ၀ င်ပါလိမ့်မည် ရောင်းချ အမိန့်များနှင့်တစ် ဦး နှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက် ဝယ်ခြင်း အမိန့်။
လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသော cryptocurrency စျေးကွက်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြွေစေ့၏စျေးနှုန်းသည်တစ်စက္ကန့်တိုင်းအတက်အကျရှိသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအမှာစာအားလုံးအတွက်သင်မဟာဗျူဟာရှိသည်။
အသုံးအများဆုံး ဝင်ခွင့်အမိန့်နှစ်ခု crypto ကုန်သွယ် စျေးကွက်အမှာစာများနှင့် ကန့်သတ်အမိန့်များဖြစ်သည်။ ဤအမှာစာများကို ကုန်သွယ်မှုတွင် သင်ရယူလိုသည့် သွင်းကုန်စျေးနှုန်းကို ပွဲစားအား သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသည်။
စျေးကွက်အမိန့်သည်ပွဲစားကိုချက်ချင်းဖြည့်ရန်ညွှန်ကြားလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာပွဲစားသည်လာမည့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်အမှာစာကိုရောင်းရန်လိုအပ်သည်။ အမြတ်အစွန်းများသောကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းပွင့်လာသည်ကိုမြင်သောအခါဤအမိန့်အမျိုးအစားကိုလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
သူကပြောပါတယ်, ကစျေးကွက်အမိန့်နောက်ဆုံးကုန်သွယ်စျေးနှုန်းမှာ execute မပြုစေခြင်းငှါသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ cryptocurrency စျေးကွက်သည်အလွန်မတည်ငြိမ်သောကြောင့်အမိန့်ကိုဆောင်ရွက်သည့်စျေးနှုန်းမှာအမှာစာမှာထားသည့်စျေးနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
အဲဒါကို သုံးသပ်ကြည့်ရအောင် Cardano လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာ $0.9003 ဖြစ်သည်။
သငျသညျသတိပြုမိလိမ့်မယ် $ 0.9003 အစား, သင် $ 0.9005 မှာစျေးကွက်ထဲသို့ဝင်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းအပြောင်းအလဲသည်အသေးစားဖြစ်လိမ့်မည်၊ သင်၏အမြတ်အစွန်းရရှိရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုများစွာထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ crypto စျေးနှုန်းများသည်အမြဲတစေပြောင်းလဲနေသဖြင့်ကွာခြားချက်မှာစျေးကွက်အမှာစာများနှင့်သာမန်သာဖြစ်သည်။
သင်ကုန်သွယ်မှုကိုတိကျသောစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ င်လိုလျှင်ကန့်သတ်ချက်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။
ကန့်သတ်ချက်အမိန့်သည်သင့်အား cryptocurrencies ကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းဝယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကန ဦး ကတ်ဒရို၏ဥပမာအားဖြင့်ကန့်သတ်ချက်သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်မည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
Cardano သည်လက်ရှိတွင် ၀.၉၀၀၃ ဒေါ်လာရှိသည်။
သင်ဝယ်ယူမှုအမှာစာကိုလိုချင်သည်၊ သို့သော် Cardano ၏စျေးနှုန်းသည် ၀.၉၀၁၅ အထိမြင့်တက်မှသာ။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် - သင်တစ် ဦး နေရာ ကန့်သတ်အမိန့် $ 0.9015 မှာ။
Cardano ၏စျေးနှုန်းသည် ၀.၉၀၁၅ သို့ရောက်သွားပါကဤကိစ္စတွင်သင်၏ပွဲစားသည်သင်၏အမိန့်ကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ သင်မဖျက်သိမ်းပါကအမိန့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားလိမ့်မည်။
ဝင်ခွင့်ဗျူဟာနှင့်အတူ၊ သင်၏ crypto ကုန်သွယ်မှုများကို ပိတ်ရန် ခိုင်မာသောဗျူဟာတစ်ခုလည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့ အခြေခံနည်းလမ်းကတော့ 'stop-loss' နဲ့ 'take-profit' ဆိုတဲ့ အမိန့်ကနေတဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရပ်တန့်ခြင်းအမှာစာသည် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်စဉ်တွင် အသုံးအဝင်ဆုံးသော အမှာစာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အန္တရာယ်ကို ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့ပါးစေနိုင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ crypto စျေးကွက်သည် သင့်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါက သင်သည် ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုမှထွက်လိုသည့်စျေးနှုန်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ရေရှည် crypto ခန့်မှန်းမှု.
LTC တွင် ၀ ယ်ရန်အမှာစာကိုဒေါ်လာ ၁၈၅ ဖြင့်သင်လိုချင်သည်။
သို့သော်သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင် ၂% ကျော်ဆုံးရှုံးမည့်အန္တရာယ်ကိုသင်ရှောင်ရှားလိုပါသည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာ Stop-loss order ကို ၀ င်ပေါက်ဈေးထက် ၂% နဲ့ $ ၁၈၁.၃၀ သတ်မှတ်ထားသည်။
ဆန့်ကျင်တွင်မူ၊ အကယ်၍ သင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုပြုလုပ်လိုပါက ၀ င်ငွေထက် ၂% တွင်ရပ်နားရန်ဆုံးရှုံးမှုအမိန့်ကိုဒေါ်လာ ၁၈၈.၇၀ သတ်မှတ်မည်။
Stop-loss အော်ဒါများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ပွင့်လင်းသောအနေအထားတစ်လျှောက်လုံးစျေးကွက်တွင် tabs များကိုကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်းစရာမလိုပါ။
သင်စျေးကွက်ထဲ ၀ င်ရန်နှင့်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုမည်သို့ကန့်သတ်ရမည်ကိုသင်သိပြီ ဖြစ်၍၊ သတ်မှတ်ထားသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုသင်မည်သို့ထိန်းချုပ်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်မည်မျှလုပ်လိုသည်ဟူသောစိတ်ကူးဖြင့် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုကိုစတင်ရန်အရေးကြီးသည်။
အမြတ်အစွန်းယူသည့်အမိန့်ကို သင့်ပွဲစားအား သင့်အမြတ်အစွန်းပစ်မှတ်သည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သရုပ်ပြရန် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်သို့ရောက်သည်နှင့် အကျိုးအမြတ်အတွက် ပွဲစားအား အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစျေးနှုန်းတက်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့် LTC တွင်သင်ဝယ်ယူမှုအမှာစာချထားသည်ဆိုပါစို့။
လက်ရှိ LTC ၏စျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၁၈၅ ဖြစ်သည်။
သင်အမြတ် ၅% ရချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအမြတ်ငွေဒေါ်လာ ၁၉၄.၂၅ သတ်မှတ်ထားတယ်။
LTC ၏စျေးနှုန်းသည် ၁၉၄.၂၅ ဒေါ်လာသို့မြင့်တက်ပါကသင်၏ပွဲစားသည်သင်၏အမြတ်အစွန်းအမိန့်ကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပြီးရာထူးကိုရောင်းမည် - သင်၏ ၅% အမြတ်အစွန်းတွင်သော့ခတ်လိမ့်မည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းသင်၏ဝင်ခွင့်စျေးနှုန်း၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် Stop-loss နှင့်အမြတ်ယူရန်အမိန့်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းမည်သည့်လမ်းကြောင်းသို့ ဦး တည်သည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ သင်၏ပွဲစားသည်သင်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
အပိုင်း ၃။ Crypto အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလေ့လာပါ
crypto ကိုမည်သို့ရောင်းဝယ်ရမည်ကိုလေ့လာသောအခါအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားစျေးကွက်များကဲ့သို့ပင်အန္တရာယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံ။ နေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငွေရှာဖို့အတွက်သင်ဟာစွန့်စားဖို့လိုတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ တွက်ချက်ထားသော ရွေ့လျားမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး သင့်ဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာကို ကန့်သတ်ရန် အမှန်တကယ် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် crypto ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတွင် သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် မည်သည့်ရှယ်ယာကို တတ်နိုင်သည်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးဗန်းစကားတွင်ဤကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို 'စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများ' အဖြစ်လူသိများသည်။ ၎င်းတို့တွင်သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအရင်းအနှီးကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သင်ချမှတ်ထားသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။
ဤနေရာတွင်သင်ပထမဆုံးအကြိမ် crypto ကိုမည်သို့ရောင်းဝယ်ရမည်ကိုလေ့လာသောအခါစိတ်ထဲမှတ်ထားရမည့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများစွာကိုဆွေးနွေးထားသည်။
ရာခိုင်နှုန်းအခြေပြု Crypto Bankroll စီမံခန့်ခွဲမှု
တစ် ဦး က bankroll စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မဆိုပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သွယ်တစ်ခုနောက်ခံအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတွင်သင်စွန့်စားလိုသည့်ပမာဏကိုသတ်မှတ်သည်။ ကုန်သည်များသည်များသောအားဖြင့်မိမိတို့၏ bankroll စီမံခန့်ခွဲမှုကိုရာခိုင်နှုန်းအရသတ်မှတ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ရာထူးများအားလုံးကို ၂% အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ရရှိနိုင်သည့်ကုန်သွယ်ရေးရန်ပုံငွေ၏ ၂% ထက် ပို၍ မစွန့်စားပါဟုဆိုလိုသည် တခုတည်းသော cryptocurrency ကုန်သွယ်မှု။ စျေးကွက်မည်မျှအလားအလာကောင်းသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ သင်သည်ဤ ၂% ကိုအမြဲတမ်းထားမည်။
စျေးကွက်နှင့်အတူ, သင်၏ကုန်သွယ်မြို့တော်လည်းအတက်အကျပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်မှုများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ bankroll စီမံခန့်ခွဲမှုအားပြန်လည်တွက်ချက်ရန်လိုအပ်သည်။
မင်းရဲ့ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲမှာ $ 5,000 ရှိတယ်ဆိုပါစို့။
သင်၏စုစုပေါင်းလက်ကျန်ငွေ၏ ၂% ထက်မပိုရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုအတွက်သင်လောင်းနိုင်သောအများဆုံးပမာဏမှာဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။
ကောင်းသောရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်သင့်အကောင့်တွင်ဒေါ်လာ ၇၅၀၀ သင့်တွင်ရှိသည်။
အလှည့်တွင်သင်ယခုဒေါ်လာ ၁၅၀ အထိလောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် $ 150 ၏ 2% ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေသည်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ အထိလျော့နည်းသွားပါကသင်၏လက်ရှိဘဏ်လိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာအရသင်သည်ဒေါ်လာ ၆၀ အထိသာလောင်းနိုင်သည်။
သင်၏ cryptocurrency အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာစွန့်စားမှုနှင့်အချိုးကိုအခြေခံသည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုချမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်တွင် စွန့်စားရသောဆုအချိုး 1:1.5 ရှိသည်ဟု ပြောပါ။
ဆိုလိုတာက - သင်စွန့်စားချင်တဲ့ $ 1 တိုင်းမင်းဟာဒေါ်လာ ၁.၅ အမြတ်ရဖို့မျှော်လင့်တယ်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောင်းမယ်ဆိုရင်အမြတ်အစွန်းဒေါ်လာ ၁၅၀ ရချင်တယ်။
ယခင်မက်ထရစ်အပြင်၊ တွင်ဖော်ပြထားသော အစီအစဉ်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ crypto ကုန်သွယ် bot ဘလော့ဂ် - ရလဒ်အချိုးသည် 1.0 ထက် ပိုများပါက၊ အမြတ်အလားအလာထက် စွန့်စားရမှု ပိုများသည်။ အချိုးသည် 1.0 ထက်နည်းပါက၊ အမြတ်အလားအလာသည် အန္တရာယ်ထက် ပိုများသည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းဤသဘောတရားသည်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်အစပြုသူများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိပညာရှင်များအတွက်သင့်လျော်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် take-profit နှင့် stop-loss အမိန့်များကို အသုံးပြု၍ ဤစွန့်စားမှုဆုလာဘ်နည်းဗျူဟာများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်မှအသစ်များအတွက် - မြှင့်တင်ခြင်းသည်သင့်ထက်အရင်းအနှီးပိုများနိုင်သည်။ သင်တတ်နိုင်သည်များကိုအစုရှယ်ယာ ၀ ယ်ယူပြီးကျန်ငွေများကိုချေးငွေအဖြစ်ယူဆောင်လာလိမ့်မည် မင်းရဲ့ပွဲစား
သင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်အတိုင်းတိုးမြှင့်ခြင်းသည်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ သူကပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုပိုကောင်းစေနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
သင့်တွင် သင့်ကုန်သွယ်အကောင့်တွင် $2,000 ရှိပြီး ၎င်းကို BTC/USD တွင် ရှယ်ယာထည့်လိုပါသည်။
သင်၏ပွဲစားသည် သင့်အား 1:20 ၏ leverage ကိုပေးသည် - ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည်သင်၏ရှယ်ယာ 20-ဆတိုးနိုင်သည်။
သင်သည် 1:20 ၏ leverage ကိုအသုံးပြုပြီး ယခုအခါ သင်၏ရာထူးတန်ဖိုးသည် $40,000 ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သြဇာသက်ရောက်မှု ၁း၁၀ ကိုလျှောက်ထားပါကသင်၏ရာထူးကိုဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ တန်ဖိုးသတ်မှတ်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်သူများသည် CFD များရောင်းဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်သြဇာကောင်းခြင်းအားရယူခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အင်္ဂလန်တွင် crypto မှအပ CFD ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးတွင်သင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအချို့သောနိုင်ငံများတွင်မူသြဇာအကန့်အသတ်ဖြင့်ကျော်ကြားမှုမရှိပါ။ အချို့သောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ၁: ၁၀၀၀ အထိမြင့်တက်နိုင်သည့်သြဇာကိုတွေ့ရ။ သင်အံ့အားသင့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောသြဇာသက်ရောက်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည့်အခါသင်သည်မလိုလားအပ်သောစွန့်စားမှုများကိုလည်းဖိတ်ခေါ်နေသည်။
ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကို ဥပမာတစ်ခုပြကြပါစို့။
$100 ၀ယ်ဖို့အမှာစာတင်ချင်တာလား။ Neoအကြွေစေ့တစ်ခုလျှင် $35 စျေးနှုန်းရှိသည်။
သင်သည် 1:5 ၏ leverage ကိုအသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် – ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏စုစုပေါင်းရှယ်ယာတန်ဖိုးသည် ယခု $1,000 ဖြစ်သည်။
နာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် NEO ၏စျေးနှုန်းသည် 2% တက်လာသည်။
သြဇာမပါဘဲ - ဒီကုန်သွယ်မှုအပေါ်သင်၏အမြတ်အစွန်း $2ဖြစ်လိမ့်မည်။
မင်းက 1:5ကိုသြဇာသက်ရောက်ပြီးကတည်းကမင်းရဲ့အမြတ်က ၁၀ ဒေါ်လာအထိတိုးလာတယ်။
ထင်ရှားသည့်အတိုင်း၊ သြဇာသည်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုမြှင့်တင်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် NEO ၏စျေးနှုန်းကျဆင်းသွားပါကသင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်းပိုမိုများပြားစေလိမ့်မည်ကိုသတိရပါ။
အပိုင်း ၄: Crypto စျေးနှုန်းများကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည်ကိုလေ့လာပါ
သငျသညျဤဝေးသောဝေးလာကြပြီအဖြစ်, ယခုသင် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုပါဝငျသောအရာကို၏အခြေခံဆုပ်ကိုင်ရပါမည်, သုံးစွဲဖို့အမိန့်အမျိုးအစားများနှင့်အန္တရာယ်များကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လို။
crypto အရောင်းအဝယ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောစတင်မှုကိုရရှိရန်အတွက်သင်သည်အအေးမိသည့်ဒေတာများကိုလည်းမှီခိုရန်လိုအပ်သည်။ ကုန်သည်များသည် crypto ၏စျေးနှုန်းကိုလွှမ်းမိုးသည့်အချက်များကိုနားလည်ရန်နည်းလမ်းများစွာကိုအသုံးပြုကြသည်။
ဤအပိုင်းတွင်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ဆိုင်သောကုန်သွယ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချရန်သင် crypto စျေးနှုန်းများကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ကြောင်းဆွေးနွေးပါမည်
အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း cryptocurrency ၏မတည်ငြိမ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္aspectsာရေးရှုထောင့်ကို examine ။ ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလောကရှိတိုးတက်မှုအသစ်များနှင့်သင့်ကိုယ်သင်မွမ်းမံနိုင်ရန်ဤဆန်းစစ်လေ့လာမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ cryptocurrency ကွန်ယက်များသည်ရိုးရာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် crypto စျေးကွက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောအခါ၊ သင်သည် blockchain တိုးတက်မှုနှင့်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါအချက်များသည် စတော့များနှင့် စတော့များကဲ့သို့ သမားရိုးကျ ငွေချေးခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ကုန်စည်.
Crypto Trading မြင်ကွင်းကိုသုတေသနပြုသောအခါရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်အရာများစာရင်းကိုဒီမှာဖော်ပြထားသည်။
Liquidity နှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ။
စီးပွားရေးနှင့် cryptocurrencies ၏အသုံးပြုမှု။
ကမ္ဘာနှင့် နိုင်ငံအလိုက် စည်းမျဉ်းများ။
သင်နောက်ထပ်စူးစမ်းလေ့လာသည်နှင့်အမျှ၊ cryptocurrency စျေးနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုသင်ထင်သောအချက်များပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် Elon Musk သည်သူ၏ပရိုဖိုင်းတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုမှတ်သားပြီးသည့်နောက်တွင် Bitcoin စျေးနှုန်းသည် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် cryptocurrencies ၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအထောက်အကူပြုသောသိသာထင်ရှားသောအချက်တစ်ချက်မဟုတ်ဟုယူဆရန်ဝေးတော့မည်မဟုတ်ချေ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကစောင့်ကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့စာရင်းလိုဖြစ်နေနိုင်တယ်။ အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ယခုတွင်သင်သည် real-time သတင်းနှင့် cryptocurrencies နှင့်သက်ဆိုင်သော updates များကိုပို့သောဝန်ဆောင်မှုများကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသင်၏အချိန်အားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုအပ်ပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏သမိုင်းဝင်စျေးနှုန်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် cryptocurrency စျေးကွက်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ သင်တစ် ဦး အထူးသဖြင့် crypto pair တစုံ၏စျေးကွက်စိတ်ကူးကိုနားလည်ရန်ဇယားများနှင့်နည်းပညာညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြု။ လိမ့်မည်။
ယနေ့ဈေးကွက်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများစွာရှိသည် - ရွေ့လျားပျမ်းမျှ၊ MACD ညွှန်းကိန်း၊ ပျမ်းမျှ ဦး တည်ရာညွှန်းကိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်အစွမ်းသတ္တိအညွှန်းကိန်းများ - အခြားသူများစွာတို့တွင်။ သင်ရွေးချယ်မည့်သူများသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာနှင့်ငွေကြေးပန်းတိုင်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အတွေ့အကြုံမရှိသောကုန်သည်တစ် ဦး အတွက်အခြေခံနှင့်နည်းပညာနှစ်မျိုးစလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းသည်အတော်ပင်လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ဘယ်မှာလဲ crypto အချက်ပြမှုများ မင်းရဲ့အကူအညီကို လာနိုင်တယ်။
Crypto Trading အချက်ပြများသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစံညွှန်းများအရသတ်မှတ်ထားသောအစပျိုးစက်များဖြစ်သည်။ သူတို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ရန်လိုအပ်မှုကိုဖြတ်တောက်လိုက်သည်။
သင် ၀ ယ်လိုသည်ဖြစ်စေရောင်းရန်မှာကြားသင့်သလား။
သုတေသနအတွက်အချိန်အလုံအလောက်မရှိဘူးဆိုရင်၊ crypto အချက်ပြမှုများ Learn2Trade တွင်အသက်ကယ်နိုင်သည်။
အပိုင်း ၅: Crypto ပွဲစားကိုမည်သို့ရွေးရမည်ကိုလေ့လာပါ
Cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုအများစုကိုအွန်လိုင်းမှပြုလုပ်သည်။ သင့်အိမ်၏သက်သောင့်သက်သာရှိမှုမှ crypto ကိုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရန်အတွက်သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပွဲစားကို ဦး စွာရှာရန်လိုအပ်သည်။ သင်ယခုသိသည့်အတိုင်းသင်၏ပွဲစားသည်သင်၏ကိုယ်စားသင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအမိန့်အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုရှာဖွေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အွန်လိုင်း crypto ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရေးကြီးသောအချက်များစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
ပွဲစားတစ် ဦး အားယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းသေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာ၎င်းတို့သည်ဘဏ္authorityာရေးအာဏာပိုင်ထံမှလိုင်စင်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်နေရာများကိုကုန်သည်များ၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ပွဲစားပလက်ဖောင်းများသည်တင်းကျပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်အာမခံသောအဖွဲ့အစည်းများမှထိန်းချုပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကိုသီးခြားဘဏ်စာရင်းများတွင်ထားရှိရန်နှင့်ပုံမှန်စာရင်းစစ်များသို့တင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ အကျော်ကြားဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်သြစတြေးလျမှ ASIC၊ အမေရိကန်ရှိ FINRA၊ ယူကေရှိ FCA၊ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် CySEC နှင့်စင်ကာပူရှိ MAS တို့ဖြစ်သည်။
သင်၏စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးအချက်မှာသင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားသည်အနည်းဆုံးထိုအာဏာပိုင်များမှလိုင်စင်ရရှိထားသည်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပွဲစားများသည်အခကြေးငွေပေးကြသည်။ ဤတွင်သင်တွေ့ကြုံရမည့်အခကြေးငွေအမျိုးမျိုးကိုခြုံငုံ။ ဖော်ပြထားသည်။
ကော်မရှင်များသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်သောတိုက်ရိုက်အခကြေးငွေများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်ပွဲစားသည် cryptocurrency trades အတွက် ၁.၂% ကော်မရှင်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်စျေးကွက်ထဲဝင်သောအခါ ၁.၂% ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်ထွက်ခွာသောအခါတစ်ကြိမ်ထပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင့်ကိုကော်မရှင်မပေးပဲကုန်သွယ်ခွင့်ပြုတဲ့အွန်လိုင်းပွဲစားများစွာရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောထင်ရှားသည့်အကျိုးဆောင်ပွဲစားတစ်ခုမှာ eToro ဖြစ်သည်၊ သင်က cryptocurrencies ၁၆ ခုရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
ပျံ့နှံ့မှုသည်သွယ်ဝိုက်ကြေးဖြစ်ပြီး crypto pair ၏ ask နှင့် offer စျေးနှုန်းတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းမဟုတ်သော်လည်းပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။
EOS/USD ၏ ဝယ်ဈေးမှာ $4.3000 ဖြစ်ပြီး ရောင်းဈေးမှာ $4.3002 ဆိုကြပါစို့။ ပြန့်ပွားမှု ၂ မျိုးလို့ ဘာသာပြန်တယ်။ PIPS.
အကယ်၍ သင်သည် EOS ကိုကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ပါက၎င်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကို ၂ စက္ကန့်ခန့်အရှုံးပေါ်စေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ မည်သည့်အမြတ်ကိုမဆိုရရှိရန်အတွက်ဤ crypto ကုန်သွယ်မှုအတွက်သင် pips ၂ ခုကျော်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏ပွဲစားထံမှကျယ်ပြန့်သောပျံ့နှံ့မှုကိုရှာဖွေနေသည်။
ကုန်သွယ်မှုသည် သင့်ပွဲစားထံ အရင်းအနှီးများစွာ အပ်နှင်းရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် မည်သည့် အပ်ငွေနှင့် ငွေထုတ်ရွေးချယ်ခွင့်များကို ရနိုင်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံးပွဲစားများသည် သင့်အတွက် ရွေးချယ်မှုအနည်းငယ်ရှိပါမည်။ ၎င်းတို့တွင် ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများ၊ ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ်များအပြင် ပြင်ပမှ အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များ ပါဝင်သည်။ PayPal က.
Crypto Online ရောင်းဝယ်ရန် အကောင်းဆုံးပွဲစား
စစ်ဆေးရန်စာရင်းဖြင့်ပင်၊ မှန်ကန်သောအွန်လိုင်းပွဲစားကိုရှာဖွေခြင်းသည် ကြောက်စရာကောင်းသည့်အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးကိုရှာဖို့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က အဲဒါကို ယူခဲ့တယ်။ crypto ကုန်သွယ် 2022 အတွက်ဆိုဒ်များ။
ဤတွင်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စံနှုန်းအားလုံးကို ဖယ်ရှားသော ပွဲစား။
AVATrade - တင်းကျပ်သောပျံ့နှံ့မှုများနှင့်အတူ Crypto CFD များကိုကုန်သွယ်မှု
AvaTrade သည်အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာဆက်တိုက်အောင်မြင်ခဲ့သည့်ကောင်းမွန်စွာတည်ထောင်ထားသောအကျိုးဆောင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ AvaTrade ၏အထင်ရှားဆုံးအချက်မှာပွဲစားများသည်တရား ၀ င်တရားမ ၀ င်ကုန်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ခွင့်ပြုထားသည့်စည်းမျဉ်းလိုင်စင်အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ယူကေ၊ သြစတြေးလျ၊ အီးယူ၊ ဂျပန်၊ တောင်အာဖရိကနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရသာမကဘဲ AvaTrade သည်ထို site ရှိကုန်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လည်းထွန်းလင်းတောက်ပသည်။ နည်းပညာညွှန်းကိန်းများ၊ ဇယားများသို့မဟုတ်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများဖြစ်ပါစေ AvaTrade သည်သင့်အားဖုံးလွှမ်းထားသည်။
ပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများဖြစ်သော 'Zulutrade' နှင့် 'Duplitrade' နှင့်အတူသွားပြီးသင်သွားရာတွင်ကုန်သွယ်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်လည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။
အပိုင်း ၆။ ယနေ့ခေတ် Crypto ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်ရမလဲလေ့လာပါ - Walkthrough
ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံလမ်းညွှန်မှာတော့ကျနော်တို့ cryptocurrency ကုန်သွယ်၏အပေါငျးတို့သရှုထောင့်ဖုံးလွှမ်းပါပြီ။ ယခုတွင်သင်သည်ကျန်ရှိနေသေးသောအရာသည်သင်၏ပွဲစားစာရင်းဖွင့်ပြီးသင်၏ကုန်သွယ်ရေးခရီးကိုစတင်ရန်ဖြစ်သည်။
အခြားအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဤလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်သင့်အားလမ်းညွှန်ရန်ဥပမာတစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးကော်မရှင် - အခမဲ့ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုနေရာချနိုင်ပုံကိုပြသရန်ငါတို့ Capital ကို Capital.com ကိုအသုံးပြုမည်။
စတင်ရန် Capital.com ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွား၍ 'Join Now' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်စသည်ဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။
Capital.com သည် KYC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီသင့်အစိုးရ၏ထုတ်ပေးသော ID၊ သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်တင်ရမည်။
Capital.com တွင်၊ သင်ဤအပိုင်းကိုနောင်အတွက်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ သင်သည်ငွေထုတ်ယူလိုလျှင်သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ ၂,၂၅၀ ထက် ပို၍ သွင်းလိုပါကသင်တက်ရောက်ရန်သာလိုအပ်သည်။
သင့်အကောင့်ကို စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ငွေသွင်းငွေထုတ်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ သင်သည် ဘဏ်ငွေလွှဲမှု၊ အကြွေး/ဒက်ဘစ်ကတ် သို့မဟုတ် PayPal ကဲ့သို့သော e-wallets မှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Netellerဒါမှမဟုတ် Skrill.
အဆင့် ၄: ကုန်သွယ်ရေး Crypto ကိုစတင်ပါ
ယခုတွင်သင်သည် crypto ကိုစတင်ရောင်းဝယ်ရန်အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သင်မှာယူမှုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါက Crypto Trading Orders အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏စာကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
သင်ရေကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Capital.com ကစာရွက်ပိုက်ဆံပါတဲ့သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုလည်းသင့်အားပေးသည်။ သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, သင်ကုန်သွယ်ချင်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ငွေကြေးရှာဖွေ, အမိန့်အမျိုးအစားရိုက်ထည့်နှင့် 'Open Trade' ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါက - သင်ပထမဆုံး.com crypto ကုန်သွယ်မှုကို Capital.com တွင်တင်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Crypto လမ်းညွှန်လေ့လာခြင်းတွင်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ယခုအချိန်တွင်သင်သည်စျေးကွက်ထဲမ ၀ င်မီ cryptocurrencies နှင့်သင်သိရန်လိုအပ်သည်များကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ထားသင့်သည်။
သင်အတွေ့အကြုံရသည့်တိုင်သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်အပေါ်ပညာဆက်လက်သင်ကြားရန်မှာကောင်းသည့်အကြံဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်သော cryptocurrency ၏စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်များကိုသေချာစွာနားလည်ပြီး demo အကောင့်ဖြင့်လေ့ကျင့်ပါ၊
နိဂုံးချုပ်ရန် - cryptocurrency အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အဆင်ပြေစေမယ့် online နှင့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သံသယဖြစ်ပါက၊ သင်သည်အမြဲတမ်း Capital.com နှင့်အမြဲတမ်းသွားနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှ crypto ကိုရောင်းဝယ်မှုသည်လုံခြုံသည်ဟုယူဆပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ အွန်လိုင်း cryptocurrency ကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်လုံခြုံသည်။
အဘယ်အရာကို cryptocurrency ၏စျေးနှုန်းဆုံးဖြတ်သည်?
cryptocurrency ၏စျေးနှုန်းကိုမောင်းနှင်သည့်အချက်များများစွာရှိသည်။ ယင်းတွင်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း၊ စည်းမျဉ်းပြောင်းလဲမှုများ၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ crypto market နှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အမြဲတမ်း update လုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
crypto trade တွင်အမြတ်ရရန်သင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုမှန်ကန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သင့်သည်။ သင်၏ခန့်မှန်းချက်အရသင်မှာယူမှုကိုပြုလုပ်သည်၊ အကယ်၍ စျေးကွက်သည်သင်ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်းရွေ့လျားနေပါကသင်အမြတ်ရလိမ့်မည်။
အမြတ်ရောင်းဝယ်မှုကို crypto ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ အမြတ်ရောင်းဝယ်မှုကို crypto ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်း၏ ဦး တည်ချက်ကိုမှန်ကန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းရမည်။ eToro သည် ၁၀၀% ကော်မရှင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်မှာ crypto ကိုရောင်းလို့ရမလား။
ဟုတ်ပါတယ်, cryptocurrency စျေးကွက်အမေရိကန်အတွက်အလွန်တက်ကြွဖြစ်ပါတယ်။ သင်စတင်ရန် eToro ကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်ရှာရန်အကြံပြုသည်။ သို့သော်၊ သတိပြုရန်မှာ၊ crypto CFD များကိုသင်မရရှိနိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ ။